प्राविधिक शिक्षा हाम्रो प्राथमिकता : मुकुन्दप्रसाद शर्मा — Chetana Online
मुसिकोट बहुमुखी क्याम्पस, रुकुम
यस अघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेको पश्चिम रुकुम स्थित मुसिकोट बहुमुखी क्याम्पस यस शैक्षिकसत्र देखि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रुपमा स्थापित भएको छ । २०३७ सालमा स्थापना भएको यस क्षेत्रकै सबैभन्दा जेठो क्याम्पसमा आगामी शैक्षिक सत्र देखि नयाँ विषयहरु पनि थप हुन थालेका छन् । क्याम्पसको शैक्षिक गतिविधि, शैक्षिक कार्यक्रम, भौतिक पूर्वाधार लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर रुकुम स्थित पत्रकार लक्ष्मण केसीले क्याम्पस प्रमुख मुकुन्द प्रसाद शर्मासँग गरेको कुराकानि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
तपाईहरु त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित हुनुहुन्थ्यो । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा किन जानुभयो ?
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले सार्वजनिक शिक्षामा गुणात्मकता कायम गर्नका लागि आफ्ना कार्यक्रमहरु ल्याएर अघि आएको छ ।
विशेष गरेर मध्यपश्चिम क्षेत्रका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर कायम गर्नका लागि नयाँ योजना ल्याएको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय भन्दा फरक देखिएको छ । खास गरेर ४० पूर्णाङ्कको प्रयोगात्मक र ६० पूर्णाङ्कको लिखित गर्ने भएको छ ।
यसले भर्ना भएका सबै विद्यार्थीहरु प्रथम श्रेणीमा उत्र्तीण हुने अवस्था सृजना भएको छ । सेमेस्टर प्रणालीमा पाठ्यक्रम डिजाइन गरिएको छ । यसले विद्यार्थीहरुको शिक्षामा गुणस्तर कायम हुने देखेर हामी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा गएका हौं ।
तपाईहरुले नयाँ विषयहरु पनि लिन खोज्नुभएको छ । यो क्याम्पसमा कुन कुन नयाँ विषयहरु आउँदै छन् ?
हामीले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा चलिरहेका विषयलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छौं । यो भन्दा आगाडी हामीले क्याम्पस सञ्चालक समितिको बैठकबाट विएससी एजी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थियौं ।
त्यसका लागि विश्वविद्यालयले भौतिक पूर्वाधार तर्फ ८० लाख रुपैयाँ विनियोज गरेको छ । हामीले विशेष गरेर मानविकि सङ्कायमा सोसल ओर्क, जर्नालिजम र अन्तराष्र्टि«य सम्बन्धन जस्ता विषयहरु अर्को शैक्षिकसत्र देखि थप्ने जमर्को गरेका छौं ।
पछिल्लो समय देशव्यापी नै सरकारी क्याम्पसहरुमा विद्यार्थी सङ्ख्या घटेको देखिन्छ । यहाँको अवस्था कस्तो छ ?
यहाँ पनि पक्कै त्यस्तो अवस्था छ । रुकुम जिल्लामा मात्रै ९ ओटा क्याम्पस सञ्चालित छन् । त्यो पनि शिक्षा सङ्कायकै हुन् । एक प्रकारले चुनौती थपिएको छ ।
थपिएको चुनौतिको सामना गर्नु नै महत्वपूर्ण कुरा हो । हामीले चुनौतिको सामना गर्दै गुणस्तर कायम गर्न सक्यौं र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई पूर्णता दिन सक्यौं भने अवस्य सुधार हुन्छ ।
अहिले जसरी सरकारी क्याम्पसका विद्यार्थी घट्ने क्रम बढेको छ । यसलाई हामीले अवस्य रोक्न सक्छौं भन्ने विश्वास लिएका छौं ।
तपाईहरुले अहिले प्राविधिक विषयहरु लिन खोज्नुभएको छ । यसको आवश्यकता किन देखियो ?
यो देशको आवश्यकता हो । नेताहरुले भौतिक पूर्वाधारतर्फ र प्राविधिक विषयमा जोड दिनुभएको छ । वास्तवमा प्राविधिक शिक्षाले नागरिकको सीप र दक्षताको विकास गर्ने, रोजगारीको ग्यारेण्टि गर्ने गर्छ ।
यसले रोजगारीका समस्या समाधान पनि गर्छ । त्यसैले हामीले निकट भविष्यमा नै प्राविधिक तथा व्यवसायीक विषय लिन खोजेका छौं ।
यो क्याम्पस यस क्षेत्रकै जेठो क्याम्पस हो । यहाँको भौतिक पूर्वाधार, खेल मैदान र प्रयोगशालाको अवस्था कस्तो छ ?
हामी अन्य क्याम्पसहरुको तुलनामा अघि नै छौं । जतिवेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निजि स्तरमा क्याम्पसहरु सञ्चालन गर्ने अनुमति दियो ।
यो क्याम्पस २०३७ सालमा स्थापना भएको हो । यो क्याम्पस यस क्षेत्रकै जेठो क्याम्पस हो । हामी भौतिक रुपमा सम्पन्न नै छौं । हामीले खेलमैदान निर्माण गरेका छौं । हामीसँग खेलकुद सामाग्रीहरु पर्याप्त मात्रामा छन् ।
हामीले पुस्तकालय पनि राम्रो बनाएका छौं । पुस्तकालय भित्र करिव ४ हजार पाँच सय पुस्तकहरु रहेका छन् । हामी अन्य क्याम्पसको तुलनामा भौतिक, खेलकुद र प्रयोगशालाका हिसावले अघि छौं । यो कुरा यहाँको सम्पूर्ण गतिविधिले पनि देखाएको छ ।
खेलमैदानको अवस्था कस्तो छ ?
हामीसँग पहिले खेल मैदानको केही समस्या थियो । अहिले हामीले खेलकुद मन्त्रालयबाट दश लाख रुपैयाँ प्राप्त ग¥यौं ।
तत्कालिन खेलकुदमन्त्री माननीय दलजित शेर्पाली हुनुहुन्थ्यो । उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो । त्यो रकमले हामीले वास्केटवल कोर्ट निर्माण गर्न सफल भएका छौं । हामी अन्य रुकुमका क्याम्पसलाई देख्यौं भने खेलकुद मैदान नै देख्दैनौं । यो दृष्टिले हेर्दा हामी नितान्त भिन्न छौं ।
तपाई लामो समय देखि शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशिल हुनुहुन्छ । अहिले सरकारले सेमेस्टर प्रणालीमा लगेको छ । यसको औचित्य के हो ?
यो अत्यन्त जटिल प्रक्रिया हो । विद्यार्थी संघ संगठनहरुले यसको विरोध गरेको अवस्था छ । यो भन्दा अगाडी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले डिग्रीमा काठमाडौं भित्रै सेमेस्टर प्रणाली लागु ग¥यो । बाहिर सकिदैन भनेर विद्यार्थी संघसंगठनहरुले आवाज उठाए ।
हामी कहाँ पनि डिग्री चलिरहेको छ । थोरै विद्यार्थीहरुको वावजुत पनि हामी सेमेस्टर प्रणाली लागु गर्न सफल भएका छौं । जब विद्यार्थीहरु परिक्षा फर्म भर्ने र परिक्षा दिनमा मात्रै केन्द्रित हुन थाले तव क्याम्पसका गतिविधि शुन्य हुन थाले ।
विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय जस्तो र क्याम्पस क्याम्पस जस्तो हुन सकेन । विद्यार्थीहरुलाई नियमित विद्यालय पठाउने र उनीहरुलाई पढाईतर्फ उत्प्रेरित गर्नका लागि सेमेस्टेर प्रणालीको आवश्यकता देखिएको हो ।
तपाईले यस क्षेत्रकै जेठो क्याम्पसको नेतृत्व गर्दै आउनुभएको छ । तपाईसँग शिक्षा क्षेत्रमा लामो अनुभव पनि छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीको के चुनौती देख्नुहुन्छ तपाई ?
वास्तवमा देशको समृद्धिसँग शिक्षाको समृद्धि जोडिएको छ ।
केही वर्ष यता नेपालको शिक्षा प्रणाली अस्तव्यस्त जस्तै भयो । त्यसलाई समृद्धिसँग जोड्नका लागि नयाँ सोँच र नयाँ बिचारलाई अगाडी राखेर काम गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रको विकास विना अन्य क्षेत्रको विकास सम्भव छैन ।
शिक्षा क्षेत्रमा जुन खालको लगानी भएको छ त्यस अनुरुप काम गर्न सकेको खण्डमा हामी अगाडी बढ््न सक्छौं । हाम्रो शिक्षा अलि परम्परागत जस्तो पनि छ । हामीले वैज्ञानिक र व्यवहारी शिक्षा तर्फ ध्यान दिनै पर्छ ।
प्राविधिक शिक्षालाई राज्यले उच्च प्रथामिकतामा राख्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक र शिक्षण क्रियाकलाप सम्बन्धी विभिन्न चुनौतिहरु छन् । त्यसको सामना गर्नुपर्छ । अहिले सूचना प्रविधिसँग हाम्रो शिक्षा अपडेट हुन जरुरी छ ।
यस क्षेत्रका शिक्षासँग सरोकार राख्ने तह र तप्काहरुलाई तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
वास्तवमा ठूलो तपस्या र अग्रजहरुको त्यागले आज हाम्रो क्याम्पस मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत आङ्गिक क्याम्पसको रुपमा स्थापित भएको छ ।
यसको लागि हाम्रा अग्रजहरुले पु¥याएको योगदानको हामीले सम्मान गर्नै पर्छ । अहिले हामी जुनसुकै स्थानमा रहन सक्छौं । हामी सबैले आएको जिम्मेवा
Default TemplateElementor CanvasElementor Full Width
Toggle panel: Facebook Instant Articles
Toggle panel: Better Reviews
Toggle panel: Better Ads Manager
Toggle panel: AddThis Tools
रीलाई गहन ढंगले पुरा ग¥यौं भने अँझ अघि बढ्न सकिन्छ ।
सभामुख महरा र सिताको प्रेमकथा : ‘मलाई जिस्क्याउने पल्लो गाउँका मास्टरसँगै विहे भयो’